Victoria Espinosa: Faraveloma ho an’ilay Puerto Rikàna mpilalao teatira, tsy nahalala sasatra · Global Voices teny Malagasy
Fisehoana an-tsehatra mihoatra ny 120 no notarihany
Voadika ny 21 Jolay 2019 5:17 GMT
Vakio amin'ny teny English, Shqip, русский, Español
Victoria Espinosa: 26 Martsa 1922 – 6 Jolay 2019. Sary nalaina taminà lahatsary YouTube .
Ny 6 Jolay 2019 ireo Puerto Rikàna no nisaona ny fahalasanan'ilay mpilalao sarimihetsika, tale, mpilalao an-tsehatra, mpampianatra sady mpamokatra tantara an-tsehatra Victoria Espinosa, endrika iray tsy zoviana amin'ny maro nanamarika ny fisehoana an-tsehatra ho an'ny taonjato faha-20. 97 taona izy izao lasa izao.
Isan'ny asa nahazendana vitan'i Victoria Espinosa ny nitarihany ireo fisehoana an-tsehatra maherin'ny 120, isan'ireny ny “Los soles truncos” (“Ilay Tapa-Masoandro”) tao amin'ny Fetibe Voalohany ho an'ny Tetatira Puerto Rikàna tamin'ny 1958 niarahany tamin'ilay Puerto Rikàna fantadaza René Marques, ary avy eo ny fitokanana ny Teatira Calatrava tao Salamanca, Espaina tamin'ny 1965..
Espinosa koa no nanorina ny Kolejy Fianarana ho Mpilalao an-tSehatra (lasa hoe Fikambanana'ireo Mpilalao an-tsehatra ao Puerto Rico amin'izao fotoana izao) sy nitarika ny fananganana ilay tahiry manokana ho an'ny Sampandraharaha misahana ny Teatitra ao amin'ny Ivontoerana ara-Kolontsaina Puerto Rikàna izay natao indrindra ho fampiroboroboana ny teatira ao Puerto Rico.
Mbola navitrika tamin'ny filalaovana an-tsehatra i Victoria Espinosa hatramin'ny taona 2011.
Mpiaro tsy misy fepetra ny teatira
Victoria Espinosa dia teraka tamin'ny 26 Mastra tao amin'ny faribohitr'i San Juan, renivohitr'i Puerto Rico. Ny vondrom-piarahamonina Trastalleres niarahany niaina, na dia ny iray isan'ny lehibe indrindra tamin'ireo mahantra ao amin'ny firenena aza, dia nalaza ho toerana iray nahaterahana sy nihalehibeazan'ireo Puerto Rikàna nalaza marobe, anisany ireo mpihira toa an'i Andy Montañez sy Daniel Santos, ilay mpanoratra José Ferrer Canales, ary ilay sangan'ny mpilalao baseball Orlando Cepeda.
Nahazo diplaoma avy ao amin'ny Oniversiten'i Puerto Rico (UPR) i Espinosa, namarana ny ‘doctorat’ tao amin'ny Oniversite Nasionaly miahy tena tao Meksika (UNAM), ary profesora nandritra ny taona marobe tao amin'ny UPR tao amin'ny toeram-pianarana Río Piedras. Tao izy no nanorina ilay Puerto Rico Theatrón , Teatira fianarana asa izay efa tsy misy intsony ankehitriny, toerana nanofanana ireo artista marobe niasa taminà teatira sy fahitalavitra.
Iray tamin'ireo fotoana maro namiratàny ny nitarihany ny fanehoana voalohany erantany tamin'ny 1978 an'ilay “El público” (“Ny Mpanatrika”) an'i Federico García Lorca, tsanganasa iray izay tsy afaka naparitaka fony izy voasoratra tany amin'ny taona 1930 tany, satria tena niresaka sy niolankolaka ny olan'ny fanambadian'ireo mitovy taovam-pananahana nefa mivady. Tamin'ny 2000, natolotra ho azy ny loka Pozo de Plata, ilay loka ambony indrindra fanomen'ny Federico García Lorca Casa Natal Museum ao Fuentevaqueros, any Granada, Espaina.
Mbola tamin'ny 2000 ihany, novàna ho Victoria Espinosa Experimental Hall ilay Music Hall Theater tranainy ao Santurce ho fankasitrahana ireo fandraisany anjara marobe ho fampiroboroboana ny teatira tao Puerto Rico.
Mbola be lavitra noho ireo fandraisana anjara sy ireo asa maha-matihanina tsy azo lavina vitany, hahatsiaro azy hatrany hatrany ireo mpianatra sy mpilalao sarimihetsika niaraka niasa tamin'i Victoria Espinosa. Tao anaty lahatsoratra iray ao amin'ny Facebook, tsaroan'ilay mpilalao an-tsehatra, mpanoratra tononkira sady mpihira, Nancy Millán (@Nancy_Millan) ny tantara iray nahatsikaiky nandritra ny fotoam-pianarana iray niarahany tamin'ity mpampianatra azy:
Nampahatsiahy ahy zavatra iray i Pedro Rodiz, zavatra izay nambaran'i Victoria Espinosa ahy fony aho nitarika voalohany fisehoana an-tsehatra iray avy amin'ny “Sol 13 interior” ho an'ny kilasy nampianariny. Fisehoana iray andrana izy izay. Nifarana ny fampisehoana ary hoy izy: “Tsy izay nasaina natao no nataonao. Tsy andrana iny, fa nitarika ny fisehoana voalohany indrindra ho an'iny tantara iny ary tsy maintsy lazaiko fa tena nampihetsi-po ahy ilay izy teo. Tena tsara.” Noheveriko fa nitsingevana aho nandritra ny andro telo nifanesy taorian'izay. Misaotra anao, Maestra.